Monsoon - Coffee Capsules – Sawbwa Coffee
အလေးချိန်:capsules ၁၀ ခုပါ
capsules ၁၀ ခုပါ
ကျတော်တို့ Sawbwa ကနေပြီး ဂုဏ်ယူစွာ ဖြင့် မြန်မာပြည်ရဲ့ 100% specialty ကော်ဖီကို အသုံးပြုထားတဲ့ Coffee Capsule လေးတွေ ပထမဆုံးစတင်ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ Nespresso original size capsule machine အကုန်လုံးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Monsoon: ရှမ်းပြည်မှ သေချာ ရွေးချယ်ထား‌သော specialty ကော်ဖီစေ့ တွေကိုသာ အသုံးပြုထားသော classic, smooth dark coffee.
Black: Rich, smooth and chocolatey. သင့်အတွက် နေ့စဉ် ဇိမ်ခံ အရသာ။ အိတ်ကို ဖွင့်ပြီး ရေနွေးထည့်လိုက်ရုံနဲ့ Sawbwa Coffee တွေ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရသာကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။ သင်ကိုယ်တိုင် သင့်အကြိုက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အရသာ ကို တစ်ထုတ်ဆီ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ကျတော်တို့ Sawbwa ကနေပြီး ဂုဏ်ယူစွာ ဖြင့် မြန်မာပြည်ရဲ့ 100% specialty ကော်ဖီကို အသုံးပြုထားတဲ့ Coffee Capsule လေးတွေ ပထမဆုံးစတင်ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ Nespresso capsule machine အကုန်လုံးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Myanmar Morning: Specialty Coffee Association of America မှ အကဲဖြတ်ထားတဲ့ မြန်မာပြည်မှ အကောင်းမွန်ဆုံးသော ကော်ဖီခြံ များမှ ကော်ဖီစေ့များကို အသုံးပြုထားပြီး ရှုပ်ထွေးပြီး အသီးကဲ့သို့သော ခံစားမှုမျိူးကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကော်ဖီ ဖြစ်ပါတယ်။